Ngingaba ugeze izinwele zami ngensipho: umbono uchwepheshe
Muva nje, abesifazane abaningi bayenqaba ukusuka izindlela ezibizayo ukuze ugeze izinwele zakho. Kodwa iqiniso lokuthi aqukethe amakhemikhali abaningi ezonakalisayo ezibangela izifo ezihlukahlukene ekhanda futhi abangele nezinwele. amashampu Modern ukuthi ukukhangisa touted njengoba panacea for zonke izinkinga, ngokuvamile abanalo umphumela oyifunayo. Ngakho-ke, abesifazane abaningi ufuna esikhundleni zabo ziphephile. Futhi ngokuya, acela lo mbuzo: Ingabe kungenzeka ukugeza ikhanda insipho? Futhi kuze kube manje, akusona impendulo elula. Ukuze uqonde ukuthi kungani, kudingeka siqonde, futhi uma kunesidingo engena esikhundleni enjalo amashampu zanamuhla?
Ingozi izimonyo nezinwele
Cishe zonke amashampu okwamanje okudayiswayo etholakalayo, aqukethe esiningi sulfate. Bangeze uqinisekise ukuthi foamed kangcono, futhi wavala ebhuqwini amafutha. Kuyinto elula ukuba kokubili abakhiqizi futhi abathengi: zingabantu engabizi futhi kulula ukuzisebenzisa. Kodwa la mathuluzi ukuletha umonakalo izinwele ekhanda. Sulfate unekhono zingene igazi buthelela emzimbeni, okubangela umdlavuza nezinye izifo. Izinwele ngemva imoto bangaba noma okunamafutha kakhulu noma ezomile futhi ukuhlukana, aqala ukuwela futhi dandruff. Kodwa ngaphandle sulfate e izihlanzi eziningi zalezi zinsuku kunezelwa eziningi nezivimbelakuvunda, flavorings kanye colorings. Yebo, futhi wathembisa ezikhangisweni ezikhishwe engokwemvelo izitshalo lingama zokwenziwa. Ngakho-ke, abaningi ngokuvamile babonakala komzimba, ukulunywa, futhi dandruff ngemva kokusebenzisa imoto. Futhi abantu sibhekene nezinkinga ezifana, cabanga ukuthi ungakwazi ugeze izinwele zakho ngensipho?
Imfihlo izinwele enempilo ogogo bethu
Abasekeli zokuchithwa amashampu agumenti Kuyaphawuleka ukuthi ngisho iminyaka 20-30 edlule kwakungekho ezihlukahlukene amathuluzi izinwele ukunakekelwa, futhi ogogo bethu Akazange akhononde zalezi zinkinga futhi waba inhloko zasebukhosini izinwele. Bahlanza ikhanda e insipho main. Yiqiniso, kubaluleke kakhulu futhi kwadingeka ukudla okunempilo futhi zezemvelo ngesikhathi. Abesifazane Cishe ungalokothi wasebenzisa hairdryer, imikhiqizo styling chemical nodayi. Kodwa iqiniso lokuthi izinwele enempilo futhi enhle, kakhulu ukuthonywa futhi imoto insipho. Ukuze uqonde ukuthi kungani lokhu yokuwasha alithandeki sakubona kukuhle, udinga ukwazi ukuthi nomphumela.
Sakhiwo izinhlobo insipho
Ukuze bathi sifuna indlela kuphela elenziwe ngokuhambisana GOST. Le piece of insipho ngokuvamile ithengiswe ngaphandle wrapper, ine iphunga ezingemnandi nombala onsundu alithandeki. Lapha kulapho azikho izithasiselo chemical. insipho okunjalo siqukethe elihlale okunamafutha acid: lauric, stearic futhi palminovoy. Luthathe ngezithako zawo 60 kuya 72%, njengoba kuboniswa izinombolo ibha. Bawathola ngezinto zemvelo eluhlaza okuvela ezilwaneni. Ngaphezu kwalokho, lokhu insipho iqukethe semali alikhali, echaza kakhulu ukuhlanzwa impahla yayo. Kodwa le mfanelo isetshenziswa njengoba i-agumenti walabo abathi ukugeza ikhanda insipho elimazayo. Kodwa namanje kube leli thuluzi namanje has a lot of abalandeli. Kungenziwa kanjani lokhu wachaza?
Ngilusizo izinga insipho
Empeleni, lokhu yokuwasha has eziningi eziwusizo obungenakuphikwa:
- ke anazo izakhiwo okusezingeni eliphezulu elwa namagciwane, izinsiza in isilonda sisheshe siphole;
- ngenxa yokubakhona alikhali, insipho izona kahle engahluziwe futhi bleaches lendwangu;
- ikhono ukubulala amagciwane, okuvumela ukusetshenziswa kwayo nokuvimbela Umkhuhlane nezinye izifo;
- isixazululo insipho kunciphisa edema, ukuvuvukala nasekwelapheni ukusha ezincane;
- kuyasiza nezifo fungal, induna kanye yamathumba,
- ukusetshenziswa insipho umzimba ukugeza kusiza ukuqeda zonke izinkinga zesikhumba futhi ivikela ezifweni ezibangelwa amagciwane.
Kungani kubaluleke ukugeza izinwele zami ngensipho
- Ngenxa semali amafutha, lokhu insipho kuyinto nethonya elihle izinwele owomile. Fatty acid uvalwe lisibekele zonke izinwele, asenze futhi okunomsoco kubo.
- It lihlanza noma ikuphi ukungcola ngisho esetshenziswa ekhanyisa izinwele kabi obudaywe.
- Shampoo insipho kuyoba usizo ukuqeda nezinwele.
Ukuze wenze lokhu, kudingeka nje ukuzisebenzisa ukugeza ke kabili ngesonto. Isebenza insipho engcono amnyama.
- Emva usebenzisa lokhu remedy izinwele zemvelo sikhula futhi aluhlaza, kulula ukuze kulingane futhi ayisekho fall out.
- kahle kakhulu ukugeza ikhanda insipho dandruff. Inqubo kufanele kwenziwe izikhathi ezimbalwa ngesonto, futhi ngemva uhlambulule ngamanzi ethafeni, kuyinto efiselekayo ukususa izinwele decoction of ngokulandelana, oregano noma burdock.
umbono Isazi phezu insipho kwezomnotho ngoba izinwele
Odokotela futhi beauticians trichologists isinyathelo ngokungananazi ngokumelene ukusetshenziswa kwaleli thuluzi ngoba ukugeza. I-agumenti main, abawasebenzisela - kuba phambi inani elikhulu kwezomnotho insipho caustic. Bathi it is desiccate kakhulu izinwele kungaholela dandruff. Izinga acid-base ibhalansi idlula konke izindinganiso ezamukelekayo. Ochwepheshe bakholelwa ukuthi uma ukugeza ikhanda insipho, izinwele kuyoba buthuntu futhi ezingaphili, ziyakuyela, dandruff kanye isikhumba uzobe emibi. Ngekusetjentiswa isikhathi eside lokhu ejenti kungenziwa zichithe ngokuphelele izinwele zakho. Alkali ukubhubhisa igobolondo wabo obavikelayo, futhi bayohlala uthole ukubukeka uzilungise, ngeke afuthe futhi iwa. Kusukela eceleni kwekhanda izovela ezingcolile futhi ikamu, ngemva izinwele zakhe, ushiye patina lemicu empunga elinamathela othini. Kodwa kunabantu abaningi abasendleleni eside insipho yokugeza izinwele ningagcini miphumela. Kunalokho, abakushoyo ukuthi izinwele ube nempilo kakhudlwana. kanjani empeleni: kumbe kuyaliphazamisa imoto insipho?
Izibuyekezo zabantu ababezama lokhu remedy
Phakathi kwabesifazane, okungenani kanye wasebenzisa inhlangano izinwele insipho, kukhona ukubukwa amabili aphikisanayo:
1. Labo Sekuyisikhathi eside owayehlushwa dandruff, nezinwele futhi omile, ngiyakholwa ukuthi lokho yensindiso. Aziqabukeli izinkulumo ezinjalo: "Ikhanda lami insipho isikhathi eside futhi musa uhlose ukusebenzisa amashampu." Bona wazi ukuthi izinwele sinamandla futhi unempilo, ayisekho gesi nokuwa, dandruff kanye ukulunywa wanyamalala.
2. Kukhona umbono okuphambene. Abanye abantu bazama kanye ukugeza ikhanda insipho enetwetwe bhala ukuthi izinwele waqala njengoba uzi lwefilakisi elingabhuliwe, zingabantu grey futhi ezingaphili. Kunzima kakhulu ukuba ugeze off, ngakho ikhanda ubukeka kabi futhi ezingcolile, futhi ikamu ngubumpunga powder.
Ubani okumelwe ubakholelwe?
Okokuqala, khumbula ukuthi abantu bonke ezahlukene, futhi yini kuhle ukuba umuntu kungenzeka inyongo ibe enye. Kuyinto engathandeki ukusebenzisa lolu insipho, uma izinwele zakho Perm okuxekethile, ukufaka umbala nofana isitayela imikhiqizo. Uma izinwele zakho bese ekhanda esomile kakhulu, kungaba nakakhulu elomile zabo. Enye incazelo lesi simanga - ukuthi izinwele kufanele ukujwayela isikhungo esisha. Futhi imiphumela emihle avele kuphela emva 3-4 izikhathi ukusetshenziswa insipho. Ngokuvamile emva ukugeza kuqala izinwele bheka sibi futhi abuyiselwe kuphela emva kwenyanga sokusebenza kwawo. Ngaphezu kwalokhu luhlobo ngempela uye wazuza izinwele zakho, udinga ukuyisebenzisa ngendlela efanele. Empeleni labo ikhona yombuzo ukuthi ungakwazi ugeze izinwele zakho ngensipho, akazivezi zonke izimfihlo uhlelo lwayo lokusebenza. Futhi ukuze ukunilimaza izinwele zakho, kuzomele ulandele imithetho embalwa.
Indlela ugeza kahle izinwele zakho ngensipho
1. Ukuze ahlanze isidingo ukuthatha insipho futhi elimnyama, elalihlala sephulwe Izibalo iphesenti fat, kungcono uma kuba 72%. It kungokwemvelo futhi akhiwe ngokuvumelana GOST. Akunakusetshenziswa ungayisebenzisi ekhanda nasemzimbeni ezinhlobo yesimanje insipho ne izithasiselo, ukuphupha noma enongiwe.
2. Ukuze hhayi ukulimaza izinwele zakho, ugeze izinwele zakho akadingi ukuba ngumnikazi insipho isixazululo insipho. Indlela elula ukuyithola uma bagcobe bar on a grater emihle, bese etshalwe kubantu abaphila ibe Foam. Ungase futhi wehlise ibha insipho emanzini futhi razmylivat imizuzu eyishumi. Ukuze ukugeza turbid isixazululo aphuzi isetshenziswa amagwebu ngaphezulu.
3. Lokhu isixazululo kumele kahle oyi-wetted insipho izinwele. Kuyinto engathandeki ukukuthinta isikhumba ngamandla ukuze kuvuse ukwanda fat. Uma ufuna ukuqeda dandruff kanye nezinye izinkinga, kubalulekile ukuba ubambe lather on izinwele for 5-10 imizuzu.
4. Soap kudinga uhlambulule obuphelele. Futhi ukugeza ke, kumelwe amanzi kuqala ecacile cool, bese acidified. ukusetshenziswa Amanzi ashisayo kuyinto engathandeki, njengoba kuyintando izona kahle isixazululo insipho. A acidified amanzi hashaza Kutlhogekani iwukudambisa umphumela alikhali.
5. Indlela ukulungiselela amanzi uhlambulule? Ukuze wenze lokhu, singakwazi ukuthatha ikhambi uviniga, apula cider kuhamba phambili, noma ngawakhamela emanzini afudumele kalamula. Ukuze uqonde ukuthi i-acid izolimaza izinwele zakho, kuzomele uzame ikhambi ulimi - ke kufanele kube kancane omuncu. izinwele Yigeze unga decoction yamakhambi: burdock, oregano, chamomile noma ngokulandelana.
Thola impendulo yombuzo othi ngabe ungakwazi ugeze izinwele zakho ngensipho, wonke umuntu kufanele ungumnikazi. Kuphela isimo izinwele kuxhomeke ekutheni oyoziletha inzuzo noma umonakalo.
Henna izinwele imaski
Izinwele zezinwele ezimfushane - ubuhle besilisa nesitayela
Indlela eluka izinwele ngokwakho?
Gelatin izinwele. Izibuyekezo emva isicelo
Pearlescent umbala - yilokhu? Ngokwazi imfashini nenhle?
"I-Maynkraft": ukwenza kanjani isidlaliso esikhumbeni bese ushintshe ukubukeka
Ezemidlalo omiswe umzimba: Ngaphambi Kokuphrinta kwimenyu nsuku zonke futhi imithetho okunomsoco for abesifazane
Imithetho Basic yokuthakwa kwamakhemikhali
Ngikuphi okuhlukileko kuneGreyidini loan mortgage? Injongo yokuboleka le mali
Domina Coral Bay Oasis Ihhotela 5 - emangalisayo ehhotela angavamile.
Indlela uthole izaphulelo on the "Aliekspresse"? Zonke izindlela zokonga
Crochet ukunitha scarves. izesekeli ezinhle kusuka izinsalela ntambo
Paul Ekman: Biography, izincwadi futhi imfundiso
Imenyu sama-kilojoule 1200 ngosuku - isinyathelo maqondana ngokuvumelana
Sukkah, lolwandle: ngezibuyekezo nezithombe zezivakashi
Amabhisikidi enongiwe ku imayonnaise